मनकामना मन्दिरको पुनःनिर्माणमा ढिलाई » खबरहरुको एउटै केन्द्र
मनकामना मन्दिरको पुनःनिर्माणमा ढिलाई
सोमबार, चैत्र ७, २०७३ ०५:५५ मा प्रकाशित !
७ चैत, गोरखा। पुरानो मन्दिर भत्काएर जगैदेखि पुनःनिर्माण थालिएको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गोरखाको मनकामना मन्दिर पुनःनिर्माण गर्न अझै एक वर्ष लाग्ने भएको छ ।
मन्दिर पुनःनिर्माणको काम पहिलो तलासम्म पुगेको भए पनि पहिलो तलाकै छाना राख्न तीन महिना लागेको हो । मनकामना मन्दिर जीर्णोद्धार समितिका संयोजक नरेन्द्रबाबु श्रेष्ठले कामदार र काठ अभाव झेल्नु नपरेको भए मन्दिर पुनःनिर्माणले गति लिने थियो भने । काठ अभाव टार्न पुरानै काठको प्रयोग भइरहेको छ ।
श्रेष्ठले भने, “चार÷पाँच जना कामदारले मन्दिर पुनःनिर्माणको काम गर्दै आएको छ । पुरातत्व विभागले भनेअनुसार पहिलेकै अवस्थामा कुनै हेरफेर नहुने गरी मन्दिर निर्माण भइरहेको छ ।” पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व बोकेको मन्दिर भएकाले पुरातत्व विभागका इन्जिनियर तथा प्राविधिक कर्मचारीको प्रत्यक्ष अवलोकन तथा अनुगमनमा मन्दिर पुनःनिर्माण अघि बढाइएको छ ।
विसं ०७२ साउनदेखि मन्दिर पुनःनिर्माण सुरु गरिएको थियो । एक वर्षभित्रमा मन्दिरको एक तला निर्माण सकिएको हो । ०७४ सालभित्रमा मन्दिरको पुनःनिर्माण सक्ने र धर्मावलम्बीलाई पूजाअर्चनाका लागि खुल्ला गरिने श्रेष्ठले बताए । पुरानो मन्दिर भत्काएपछि मन्दिर अघि रहेको खुल्ला ठाउँमा टहरो बनाएर पूजाआजा गरिँदै आइएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: सुनसरीमा चार लाख २९ हजार मतदाता
NEXT POST Next post: अब त्रिविको फारम अनलाइनबाट
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, चैत्र ७, २०७३ ०५:५५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, चैत्र ७, २०७३ ०५:५५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, चैत्र ७, २०७३ ०५:५५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, चैत्र ७, २०७३ ०५:५५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, चैत्र ७, २०७३ ०५:५५